Gaar Design Xiinka Muhiimka ah Oil Diffuser - Design fiican & Sameeyo Co., Ltd
Home » Product » diffusers caraf » Caaga diffuser muhiim ah saliid
Item no.::size ODMF17-032425 Box: L15 * W15 * H22cm Weight: 0.6biyo kg:60ml awood: 7danab Input W:100-240V，50Hz / 60HZ,0.15danab Output A:24V-0.35ku jiraan A: 1qaabka caag pc(D12.7×H18.8cm) la alwaax dhameysatay,1adabtarada pc, 1pc koobka cabbirka, 1pc A4 warqadda fariimaha size. Xidhmada: 3 lakabka sanduuqa jiingado la 8pcs insert waraaqaha / CTN 31.8 * 31.8 * 45.8 / 0.046cbm / G.W / N.W:4.8/5.8kgs MOQ:1000 sharxayaa FOB Shanghai USD13.40 / OEM dhigay adeegga Can noqon habka Shipping UPS / oogeen / EMS / TNT / FedEx, by badda .Adiga a ...
Hydrate hawada, ka saar nijaasta iyo in la abuuro jawi is dajiyaan la this gaar ah Design Xiinka Muhiimka ah Oil Diffuser. Its daruuriga saliidaha faafin caraf udgoon u ah walaaq dareenka. Dhig diffuser qolka meditation si aad u dareento dib u soo kacday ugala.
size Box: L15 * W15 * H22cm
1qaabka caag pc(D12.7×H18.8cm) la alwaax dhameysatay,1adabtarada pc, 1pc koobka cabbirka, 1pc A4 warqadda fariimaha size.
8kumbiyuutarada / CTN 31.8 * 31.8 * 45.8 / 0.046cbm / G.W / N.W:4.8/5.8kgs
Marmar madaxtooyada Glass Shumac